Columnar uye dutu nheyo
Pakuverenga uwandu columnar nheyo zvinhu
Kutaridzwa mbiru mhando
mhando 1 mhando 2
mhando 3 mhando 4
Kutaridzwa miganhu yembiru nheyo
Kukwirira pechingoro A
Kukwirira mbiru H
Nembariro chisimbiso muzvikamu ARM1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kutaridzwa kukura nheyo
Nhamba Matanda X1
Nhamba Matanda Y1
Mbiru pasi rose imba S
Kutaridzwa kukura grillage
Nhamba mitsara Fixtures ARM2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
The dhayamita pakati vharuvhu ARMD
The Zvinoumba kongiri
Cement pa cubic mita nekongiri
Kukura kongiri pakurema
simende : jecha : yakapwanyika ibwe
Pinda mutengo zvokuvakisa
simende (por bhegi 50 makirogiramu)
jecha (nokuti 1 tani)
yakapwanyika ibwe (nokuti 1 tani)
Fittings (nokuti 1 tani)
Sarudza mhando nheyo mbiru
Izvi zvingava mbiru vane dzeraundi kana rectangular chawo. Uye kumativi kana rectangular chikuru chikamu.
B - Rakafara kana dhayamita.
H - Kukwirira huru muviri.
A - Kukwirira mujinga mbiru. Kana dutu pasina chikonzero, zvino regai kutaridzwa kukura.
D - The upamhi kana dhayamita zvimwe nengoro.
D1 - Kureba rectangular chawo.
B1 - Upamhi kwenguva rectangular mbiru.
With kumativi muchinjikwa-zvikamu hukuru izvi paminiti havabatanidzwi.
Encombrements chengarava hwaro
X - Upamhi hwaro.
Y - Kureba nheyo.
X1 - Kuwanda mbiru yakafara, kusanganisira mbiru pamakona.
Y1 - Kuwanda matanda urefu, kusanganisira dzimwe makona pembiru.
S - Kana zvikasadzorwa, zvichaitwa akaverenga mbiru, vakaronga zvakaenzana pasi rose imba. Kana kwete, chete nembiru nheyo mukomberedzo.
E - Upamhi grillage.
F - Kukwirira grillage.
Kana kuverenga pamusoro monolithic grillage kwete zvinodiwa, hadzirishandisi encombrements izvi.
ARM1 - Nhamba chisimbiso nembariro muna imwe mbiru.
ARM2 - Nhamba mitsara Fixtures vari tepi grillage.
ARMD - The dhayamita pamusoro vharuvhu. Tsanangurai nguva dzose muna millimeters.
Kana chisimbiso zvisingamanikidzirwi, akaisa tsika dziri 0.
Kutaridzwa kwazvo esimende nokuda kwezvifananidzo zvaAtemisi imwe cubic mita nekongiri. In makirogiramu.
Kutaridzwa kukura nokuda mukugadzira kongiri, kurema. date Ava yakasiyana pachiitiko chimwe nechimwe.
Ivo kuvimba hachizi esimende, akapwanyika ibwe hukuru uye kuvakwa rwokugadzira. Kuataura kubva bhizimisi pamusoro zvokuvakisa.
Kuti ngaaverenge Zvinofungidzirwa mutengo zvokuvakisa, tsanangurai mitengo yavo.
Somugumisiro, purogiramu vachangoerekana overenga:
Daro pakati yakabatana matanda uye kuwanda kwavo.
Concrete vhoriyamu imwe mbiru, wakaparadzaniswa nokuda kumusoro uye pasi.
Number nekongiri grillage nokuda.
Kureba uye kurema nhamba inodiwa valves.
Mari zvokuvakisa nokuti mudziyo monolithic columnar kana murwi hwaro pamwe igwa.
Mifananidzo vachapa nepfungwawo zvayo uye zvichabatsira pamasikiro dutu nheyo.
Nokuti mabhati uye dzimba pasina mudzimba, dzimba dzine midhuri chiedza uye dzimba nezvidhina, apo kushandisa kanyika nheyo hakusi mari anowanzoshandiswa chengarava nheyo,. kukarukureta Ake pezvaitika zvinotidyira nguva, asi purogiramu yedu Masvomhu havazotori yakawanda nguva yako. All unofanira kuita zadza muminda yakakodzera maererano nemirayiridzo, uye uchafarirwa. ruzivo pamusoro inodiwa zvokuvakisa, tsvaka nokuwanda uye zvachose mutengo.
Pier hwaro ane chimiro mbiru, izvo rakabatanidzwa vachishandisa grillage. Poles izvi vanowanwa panguva makona yemberi mamiriro, uyewo panguva mharadzano masvingo, pasi mutakuri kana chete inorema masvingo, matanda uye akaoma nhengo. Munzvimbo idzodzo umo mutoro uri kunyanya kumusoro. Rostwerk kuti vaonekere chengarava hwaro, uye ane maonero zvakasimbisa zambuko pakati pembiru.
Ndokupi harifaniri kushandiswa chengarava nheyo
Shandisa nheyo Pier haina varumbidzwa pane chinjwa kana simba nevhu zvakadai peat kana mvura-nomuti ivhu ivhu. Regai kushandisa nheyo iyi mhando uye munzvimbo pane unopinza tote donhwe.
Pier hwaro ine nhamba zvakanakira kuti zviri Zvakanyanya Kunaka Panguva mhinduro pakuvaka yepachivande imba. Zviri isingadhuri pane tepi kana rakanyorwa hwaro, mari zvikuru zvinodyiwa pamusoro zvokuvakisa uye mutengo wayo kuvakwa, anopa zvishoma shrinkage uye kunoderedza zvachose nzvimbo yepasi. Nheyo iyi zvinobudirira unopikisa dzinoparadza Migumisiro chando nyandu ivhu.
Zvichienderana uremu uye nhamba storeys House rinofanira kusarudzwa uye zvinhu zvokuvakisa kwezvifananidzo zvaAtemisi nheyo. Izvi ibwe, zvidhina, kongiri uye zvakasimbisa kongiri. Maererano uye mhando zvinhu anosarudzwa shoma mbiru chikamu muchinjikwa. Saka, nokuti kongiri namagwatidziro chikamu saizi hakufaniri asingasviki 400 mamirimita nokuda masonry kwete asingasviki 600 mamirimita nokuda masonry 380 mamirimita kana zviri pamusoro pasi pamwero, uye 250 mamirimita kana kushandiswa chete ligation rwokugadzira Zabirko.
Asati kuvakwa, zvinokosha kuziva kudzama ivhu oma, mhando uye Kuronga ivhu, kana zvakakodzera, kuronga yokutsiva ake, uye nzvimbo pasi pamwero kuziva kudikanwa abudise uye mvura. Kuvaka chengarava nheyo kunoitika anotevedzana 9 nezvishoma.
1. Preparatory basa, izvo kuchenesa nzvimbo yacho.
2. Chichatara nheyo apo nyika segwapa maererano ubate.
3. Kuchera Makomba.
4. Nekuisa formwork nokuti mbiru.
5. Kuchinja kwezvinhu chisimbiso.
6. Zadza mbiru.
7. Kuita grillage.
8. Kuvakwa inonzi Zabirko fenzi kana rusvingo pakati nembiru.
9. Matanho bhesimendi mvura.
Kana imba inovakwa pamusoro nyandu nevhu, hatigoni kumbosendeka kuvaka kwakatanga. Kana akasiya amboita nheyo chando, rinogona deform.
Just uploaded kutsigirana nekongiri vanofanira kugadzirisa mukati kwemazuva 30. Panguva iyi, rokukwidza pavo hakuna inokurudzirwa.
optimally dzakakodzera simende muchiso M400, uye sezvo akazadza mavhu diki uye jecha zvinonyadzisa kuti bhavhu kugadzirwa.